नेपाल आज | प्रधानमन्त्री देउवाले किन गरे अन्तराष्ट्रिय संवन्ध समितिको अपमान ?
प्रधानमन्त्री देउवाले किन गरे अन्तराष्ट्रिय संवन्ध समितिको अपमान ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय संवन्ध समितिको अपमान गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। समितिले आईतवार विहान १० वजे छलफलका लागि उपस्थित हुन बोलाए पनि प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित नभएपछि उनको आलोचना भएको हो।
समितिले प्रधानमन्त्री देउवासँग निकट भविष्यमा हुन गइरहेको अमेरिकाको भ्रमणबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रधानमनन्त्रीको भ्रमण अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सँग समेत सम्वन्धित देखिएपछि समितिले उनलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
तर, बिहान ८ बजे समितिको सचिवालयमा फोन गरेर प्रधानमन्त्री नआउने जानकारी गराईएको जनाईएको छ। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्री नआउने भए समयमै खवर गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेर समितिको अपमान गरेको वताईन।
प्रधानमन्त्री नआउने भएपछि समिति सदस्य समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदहरु बाहिरिएका छन् । यता कांग्रेसकी सांसद पुष्षा भुसालले भने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे औपचारिक निर्णय नभइसकेको बताइन् ।
‘अमेरिका भ्रमणबारे पत्राचार र फर्मल निर्णय नभइसकेको अवस्थामा समितिमा बोलाउनुको अर्थ रहँदैन’ उनले भनिन्–‘उहाँले भ्रमण तय भएपछि आउँछु भन्नुभएको छ । समितिको अपमान भयो भन्नुभन्दा पनि भ्रमण तय भएपछि उहाँ आउनुहुन्छ ।’